उखु किसानको अझै आठ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी ! « MNTVONLINE.COM
काठमाडौँ । विभिन्न चार चिनी उद्योगले उखु किसानलाई आठ करोड बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । ६५ करोड बक्यौता रकममध्येमा तीन उद्योगले किसानलाई आठ करोड एक लाख बाँकी रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उखु किसान आन्दोलित हुँदा चार चिनी उद्योगको ६५ करोड ३१ लाख बक्यौता रकममध्ये हालसम्म ५७ करोड ३० लाख रकम भुक्तानी भइसकेको उद्योग सचिव डा. वैैकुष्ठ अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३५ करोड बक्यौता रकम रहेको श्रीराम सुगर मिलले सबै रकम भुत्तानी गरिसकेको छ भने लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र इन्दिराको बाँकी रहेको छ ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार १७ करोड बक्यौता रकम रहेको अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले दश करोड ८८ लाख बक्यौता रकम किसानको खातामा जम्मा गरिसकेको छ । मिललको बैंक खातामा एक करोेड ७६ लाख जम्मा भए पनि उक्त रकम उखु किसानको खातामा जम्मा भएको छैन् । किसानलाई भुक्तानी दिएको र खातामा रहेको रकम १२ करोड ६४ लाख भुक्तानी गरे पनि अझै उक्त मिलले चार करोड ३६ लाख बक्यौता रकम भुक्तानी बाँकी रहेको छ ।
यसैगरी चार करोड ७० लाख बक्यौता रकम रहेको इन्दिरा सुगर मिलको खातामा एक करोड ५० लाख जम्मा भएको देखिए पनि भुक्तानी शुरु गरेको छैन । लुम्बिनी सुगर मिलले आठ करोड ४१ लाख बक्यौता रकम मध्येमा हालसम्म पाँच करोड १६ लाख बक्यौता रकम किसानलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । उक्त मिलको खातामा रहेको तीन करोड रकम रोक्का राखिएको छ ।
स्वास्थ्य केन्द्रका लागि एक अर्ब आठ करोड निकासा !
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले ११३ वटा स्थानीय तहमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि रु एक अर्ब आठ करोड ५३ लाख २३ हजार शसर्त अनुदानका रुपमा